तपाईंको इनबक्समा किन यति धेरै ईमेलहरू छन् कि तपाईं पढ्नुहुन्न। | Martech Zone
तपाईंको इनबक्समा किन यति धेरै ईमेलहरू छन् कि तपाईं पढ्नुहुन्न।
आइतबार, मे 13, 2007 शनिबार, अप्रिल 16, 2016 Douglas Karr
आज, ईआरओआईले एक सर्वेक्षणमा एक अध्ययन जारी गर्‍यो जुन उनीहरूले २०० भन्दा बढी ईमेल मार्केटरहरूलाई गरे। मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ परिणामहरू निराश छन् - लगभग डरलाग्दो। ईआरओआईले ईमेल मार्केटरहरूलाई उनीहरूले के महत्त्वपूर्ण ठाने भनेर सोधे। यहाँ परिणामहरू छन्:
IMHO, म शीर्ष २ वस्तुहरूसँग पूर्ण सम्झौतामा छु। प्रासंगिकता र छुटकारा कुञ्जी हो ... ईनबक्समा सही सन्देश पाउने तपाईंको प्रमुख कारक हुनुपर्दछ। ईमेल डिजाइन र सामग्री तपाइँको मुद्दा हो, छुटकाराको क्षमता एक उत्कृष्ट ईमेल सेवा प्रदायकसँग काम गरेर सुधार गर्न सकिन्छ।
तल ले केहि भयानक लक्षणहरू देखाउँदछ र इ-मेल मार्केटर्सको साथ कुञ्जी मुद्दाहरूमा औंल्याउँछ। ईमेल मार्केटिंग 'सही समय' मा 'सही व्यक्ति' लाई 'सही सन्देश' हुनुपर्दछ। यो उत्तम छ यदि तपाइँ तपाइँको सामग्रीमा तपाइँको सबै समय केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ, तर के तपाइँ त्यो समुहलाई सही विभाजन मार्फत लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाइँको पाठकहरूको आधारमा ईमेल भित्र गतिशील सामग्री उत्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईं ती ई-मेललाई उनीहरूको इनबक्समा राख्दै हुनुहुन्छ? जब यो सबै भन्दा बढी असर गर्न गइरहेको छ?
उन्नत ईमेल मार्केटरहरूले ध्यान दिइरहेका छन् कि लेनदेन वा ट्रिगर प्रेषक मार्केटिंगको लागि एक राम्रो अवसर हो। यसको लागि त्यहाँ केहि कारणहरू छन्:
ग्राहकले सञ्चार सुरु गर्‍यो। (सहि व्यक्ति)
ग्राहकले प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरिरहेको छ। उनीहरूले यो आशा मात्र गरिरहेका छैनन्, उनीहरू यसको माग गरिरहेका छन्! (सहि समय)
सन्देश विशेष घटना वा सामग्रीको टुक्रामा लक्षित छ। (सहि सन्देश)
जबसम्म सञ्चारको प्राथमिक साधन तपाईंको ग्राहकलाई जवाफ दिने हो, अपसेल अवसरहरू अप्ट-आउट लिंकको आवश्यकता बिना त्यो सन्देशमा समावेश गर्न सकिन्छ (लेनदेन सन्देशहरू अपवाद हुन् CAN-SPAM.
सही सन्देश, सहि समय, सहि व्यक्ति
यहाँ एक उदाहरण छ: मैले एक वायरलेस राउटर खरीद गरें। पुष्टिकरण ईमेलमा, मैले एउटा सन्देश पाउनुपर्नेछ जुन मेरो बिक्रीको पुष्टि गर्दछ, मेरो शपिंग जानकारी सम्मिलित गर्दछ र मलाई नि: शुल्क शिपिंग प्रस्ताव गर्दछ यदि म मेरो कम्प्युटरको लागि नयाँ वायरलेस कार्ड थप्न चाहान्छु यदि कार्यको कलमा प्रस्ताव १० दिनमा समाप्त हुन्छ। । सायद यहाँको शिपमेंटमा थप्नको लागि प्रस्ताव छ यदि मैले यसलाई एक घण्टा भित्रमा अर्डर गरें भने!
समस्या, पाठ्यक्रम, प्राय जसो प्रणालीले कार्य परिभाषित गर्नुको सट्टामा उप-विपरित हो। हामीसँग प्रणाली छ कि ईमेल मार्केटर्सलाई न्यूजलेटर निकाल्नको लागि डेडलाइनलाई बाहिर धकेल्छ निश्चित ओपनहरू, क्लिकहरू र रूपान्तरणहरूको निश्चित मात्रामा पुग्नको लागि डेडलाइनको सट्टा। त्यसोभए ईमेल मार्केटरहरूले उनीहरूलाई भनेको कुरा गर्छन्… उनीहरूले केहि सामग्री ध्वंस गर्छन् जुन उनीहरूको सम्पूर्ण सूचीमा नम्रतापूर्वक लागू गर्न कोशिस गर्दछन् र ती ईमेल अन्तिम मितिबाट बाहिरिन्छन्।
परिणामहरू अझ खराब छन्, जब हामी ईनबक्सलाई भर्न जारी राख्छौं, ग्राहकहरूले भुक्तान गर्छन् कम ध्यान ईमेल सन्देशमा समग्र। म सबै ईमेल मार्केटरहरूलाई क्रिस बगगट र अली बिक्रीको पुस्तक पढ्न प्रोत्साहित गर्दछु - नम्बरहरू द्वारा ईमेल मार्केटिंग थप जान्न।
टैग: इमेल मार्केटिङईमेल निजीकरणईमेल ग्राहकईमेल समयसदस्यइमेलहरू ट्रिगर गरियोअपठित ईमेल
मई 13, 2007 मा 11: 26 एएम
अमेजन यो "सही सन्देश, सही समय, सही व्यक्ति" अवधारणामा धेरै राम्रो छ। तिनीहरूले तपाईंले पहिले नै खरिद गरिसक्नुभएका चीजहरू इमेल विज्ञापनहरूसँग लक्षित गर्न प्रयोग गर्छन् जुन ती खरिदहरूसँग सान्दर्भिक हुन्छन् जब त्यहाँ बिक्री/प्रवर्धन हुन्छ।
भनिन्छ, प्रणाली पूर्ण छैन। मैले भर्खरै एयर कम्प्रेसर किनेको छु, र मलाई सामानहरू लक्षित गर्नुको सट्टा, तिनीहरूले मलाई अर्को एयर कम्प्रेसर बेच्ने प्रयास गरिरहन्छन्!
मई 13, 2007 मा 2: 55 PM
म स्ल्यापसँग सहमत छु, यद्यपि तिनीहरूले प्रयोग गरिरहेको इमेल डिजाइन भयानक छ - तिनीहरूको अनलाइन सिफारिसहरू एकदम राम्रो छन्। मलाई मन पर्छ कि म कसरी किताब किन्न सक्छु र तिनीहरूले 'त्यस पुस्तक पढ्ने अरू मानिसहरूले के पढिरहेका छन्' भन्ने कुरा उठाउँछन्। एउटा अपवाद हो जब मैले अरू कसैको लागि उपहार खरिद गर्छु - त्यसपछि म लगातार त्यो उपहारमा सिफारिसहरू प्राप्त गर्छु! म चाहन्छु कि तिनीहरूले एल्गोरिदमबाट उपहारहरू फिल्टर गर्नेछन्।